Diyopost.com :: संयुक्त शैन्य अभ्यास : पूर्व 'प्रधानसेनापति'को प्रश्न, ‘भोली भारत र पाकिस्तान युद्ध भयो भने... ?’ संयुक्त शैन्य अभ्यास : पूर्व 'प्रधानसेनापति'को प्रश्न, ‘भोली भारत र पाकिस्तान युद्ध भयो भने... ?’ - Diyopost.com
काठमाडौं, १७ भदौ । शक्रबार सम्पन्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेक सम्मेलनले गरेको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय भारतमा हुने शैन्य अभ्यास हो । भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पुणेमा हुुने भनिएको शैन्य अभ्यासमा बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रले ३०/३० जनाको शैनिक टोलीको परेड खेलाउँदैछन् । संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाउने नेपालको निर्णयलाई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै केही नेता र जानकारहरूले दीर्घकालीन असर नहेरी हतारमा गरिएको निर्णयका रूपमा अर्थ लगाएका छन् ।
यसरी दक्षिण सार्क राष्ट्रमा पहिलो पटक हुन लागेको संयुक्त शैन्य अभ्यासले छिमेकी मुलुक चिन र पाकिस्तान झस्कने खतरा नहोला भन्न सकिँदैन । यदि यी दुई मुलूकले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाए भने नेपालको भूराजनीतिक आयतनमा असर गर्ने नै छ ।
उक्त अभ्यासमा नेपाली सेनाले भाग लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य कूटनीतिमा खल्बलिने कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । यसले नेपालको राष्ट्रहितलाई समेत असर गर्ने विज्ञहरुको दाबी छ । दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाका सात मुलुक सदस्य रहेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छातामा हुन लागेको उक्त अभ्यास कुनै पनि मुलुकप्रति रणनीतिक रूपमा लक्षित नरहेको भन्दै सरकारले भने आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ । बिमस्टेक राष्ट्रहरुले संयुक्त रुपमा गर्ने भनिएको शैन्य अभ्यास कत्तै लक्षित भएरै आएको हो त ? यसै विषयमा दियो पोष्टले ‘पूर्व स्याडो प्रधानसेनापति कुलबहादुर खड्कासँग कुराकानी गरेको छ ।
भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनले भारतमा संयुक्त शैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय गरेको छ, यसको औचित्य के हुन सक्ला ?
अहिले संसारभरी नै यस्ता अभ्यासहरु हुन थालेका छन् । रसिया, कोरिया, चीन लगायत देशहरुले पनि यस्तो अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । यसले विश्व ब्यापिकरणमा विशेष सहयोग पुर्याउने काम गर्नेछ । विकसित देशले उत्पादन गरेको ईक्युपमेन्टहरुलाई परीक्षण गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने कार्य यसले गर्छ । अर्को कुरा भनेको, यसले आर्मीको कमाण्डर लेबलमा परिचय गर्ने काम गर्छ । यदि चीन र रसियनबीच संयुक्त अपरेशन भयो भनेपनि यसले एकअर्कामा सहयोेगी काम गर्छ । रसियनसँग कुनै युद्ध अर्थात त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने यसको फ्याक्टले काम गर्न सक्छ । बिमस्टेक सदस्य देशभित्र आईपर्ने प्राकृतिक बिपत्तीहरुमा सहयोगार्थ पनि संयुक्त शैन्य अभ्यासले सहयोग गर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा भारतले चीन र पाकिस्तानका विरुद्ध खुलेरै गतिविधि गरिरहेको छ । यस्तोमा नेपाल अध्यक्ष रहेको बिमस्टेक सम्मेलनले पाकिस्तानर चीनलाई झस्काइदिने त होइन ?
राजनीतिक हिसाबले आफ्नो फेबरको निर्णय जसले पनि गरिरहेकै हुन्छ । त्यसमा भारत पनि अछुतो नरहन सक्ला । पाकिस्तानलाई एक्ल्याउनकै लागि सार्कलाई डाउन गराएर बिमस्टेकलाई भारतले बढि हाईलाईट गरेको पनि संचारमाध्यममा आईरहेको छ । यदि भोली भारत र पाकिस्तानबीच द्धन्द भयो भने, आफ्नो पहुँच देखाउनका लागि पनि भारतले बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि यसलाई भारतले भरपुर सदुपयोग गर्न सक्छ । तर, हामी सिपाहीले बुझ्दा चाँही त्यस्तो नहोला । तपाईले जुन कुरा उठाउनुभयो, त्यसमा सत्यता चाँही छ ।
अहिलेसम्म सार्क मुलुकहरुले संयुक्त रुपमा यस्तो अभ्यास गरेका थिएनन् । तर, अहिले कुन नियतले यो अभ्यास हुँदैछ ?
यस्तो अभ्यास विभिन्न तहमा भैरहेको नै छ । पहिले पनि हुने गरेकै थियो नै । म पहिले शैन्य तालिमको निर्देशक हुँदाखेरी पनि नेपालमा भारतीय सेनाहरु आएका थिए । हामीहरु पनि शैन्य अभ्यासका लागि भारत गयौँ । अहिले हाम्रो पाँचखालमा शान्ति सेनाको १०–२० देशका सेनाहरु आएर अभ्यासहरु भैरहेको छ । यो विभिन्न तहमा हुन्छ । यो नयाँ कुरा चाँही होईन । तर, कुन उदेश्यले अभ्यास गरिने हो त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा हो ।
उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाका लागि कसैले पनि त्यस्तो गर्न मिल्दैन । पाकिस्तानले कास्मिर यति भाग मेरो हो, यति भाग भारतको हो भनेर भन्यो भने पनि उसले हार बेहोर्नुपर्छ । कास्मिर मेरै हो भनेर पाकिस्तानले दाबी गर्यो भने उ राम्रो नेतामा गनिन्छ । यसकारणले आ–आफ्नो अस्तित्वका लागि स्वार्थ त हुन्छ नै ।
विकासोन्मुख देश नेपालका लागि सैन्य अभ्यास कत्तिको हितकर छ ?
सैनिक अभ्यासलाई आर्थिक विषय र राजनीतिक विषयलाई अलग राखेर हेरौँ न । सेना हो, उ जहिलेपनि तालिम गरेर बसिरहनुपर्छ । करीब १ लाख जति नेपाल आर्मी छ, उनिहरुको विभिन्न रोलमध्ये सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता त आफ्नो राष्टिय सुरक्षा हो । राष्टिय सुरक्षाका लागि हामी तयार हुनुपर्यो । जो जोसँग मिलेर अभ्यास गर्ने भनिएको छ, उनीहरुले कसरी पेशागत भुमिका निर्वाह गर्दारहेछन् भन्ने ज्ञान हुन्छ ।